कोरोना साँच्चै के हो? २५ दिन भेन्टिलेटर बसेका भक्तपुरका सुमनलाई सोध्नुस्! कोरोना जित्ने महत्वपूर्ण औषधी आत्मबल
रेणु त्वानाबासु भक्तपुर - शुक्रबार, असोज ३०, २०७७
कोरोना संक्रमितको संख्या ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ बढिरहेको छ। सर्वसाधारण ‘कोरोना केही होइन, रुघाखोकी जस्तै हो’ भन्दै हेपेर बसेका छन्।
तर, कोरोना के हो भनेर भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–८ इतबुँका ३० वर्षीय सुमन अवाललाई सोध्नुस्। उनले छर्लंङ्ग पारिदिनेछन्, खासमा कोरोना हो चाहिँ के भन्ने। किनकि, कोरोना संक्रमण भइसकेपछि उनले काठमाडौं टेकु अस्पतालको आइसियु–भेन्टिलेटरमा २५ दिन लगातार कोरोना भाइरसँग लडाइँ गरे र अन्ततः परास्त गरी छाडे।
सुमनलाई पहिलेदेखि बेलाबेला ‘टङसिल’ हुने गथ्र्यो। गएको भदौमा अलिअलि घाँटी दुख्ने, थुक निल्न गाह्रो हुने भइरहेको थियो। तर, लामो समयदेखि यही समस्या रहेका कारण उनले टङसिलकै औषधी खाँदै घर बसिरहेका थिए।
सुरुमा त उनले यसलाई सामान्य नै लिए। तर, औषधी खाएर पनि सञ्चो हुन छाड्यो। दिनदिनै गाह्रो हुन थाल्यो। खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन थालेपछि केही सजग भए। लगत्तै बुबालाई पनि अलिअलि ज्वरो आउने थालेपछि भने सुमन थप सशंकित भए।
उनका बुबा भक्तपुर नगरपालिका–६ का वडा सदस्य हुन्। उनी कोरोना कहरमा पनि समाजसेवामा जुटेका थिए। बुबाको साथसाथै आफूलाई पनि विस्तारै ज्वरो आउन थालेपछि सुमनले सिटामोल खान थाले।
‘सिटामोल खाएको दिन हल्का आराम हुन्थ्यो तर फेरि भोलिपल्ट ज्वरोले च्याप्दै ल्याउँथ्यो,’ सुमनले आयोमेलसँग अनुभव साटे, ‘बुबा र मैले केही दिन सिटामोल खायौं। तर, एकछिन निको भएजस्तो हुने अनि पछि फेरि ज्वरोले च्याप्न थालेपछि एकदम चिन्तित भयौं। परिवारका मुली दुवैजना बिरामी भएपछि आमा, श्रीमती, बुहारी सबै चिन्तित हुन थाले।’
केही दिन सिटामोल खाएर पनि निको नभएपछि सुमनले परिवारको सल्लाहमा दूधपाटीको भक्तपुर अस्पताल गएर कोरोना परीक्षणका लागि बुबा र आफ्नो स्वाब दिए।
त्यसबेला स्वाब संकलन गरेको तीन–चार दिनपछि मात्र रिपोर्ट आउने गथ्र्यो। स्वाब दिएपछि दुवैजना होम आइसोलेसनमा बस्न थाले।
तर, सुमनलाई भने दिनहुँ झन्–झन् गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि उनी भाद्र १३ गते काकाकी छोरी (बहिनी) सँग भक्तपुर च्याम्हासिंहमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा दिउँसो २ बजेतिर इमर्जेन्सीमा भर्ना भए।
‘भर्ना भएको केही समयपछि मोबाइलको घन्टी बज्यो। घरबाट कल आएको रहेछ,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘भक्तपुर अस्पतालबाट घरमा बुबा र मेरो दुवैको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको खबर पाएका रहेछन्।’
रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थाहा भएपछि सुमनले जनस्वास्थ्यका स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराए।
‘मेरो कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भन्नासाथ सबै स्टाफ, नर्स, डाक्टर भागभाग गरे। त्यो दृश्य देखेर मनमा लाग्यो, मलाई छुन नहुने रोग पो लाग्या हो कि क्या हो?,’ सुमन अवाक हुँदै प्रश्न गर्छन्, ‘कोरोना पोजिटिभ भएपछि त झन् स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो उपकरण लगाएर अनुशासित भएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने होइन र? तर, जनस्वास्थ्यको त्यो दृश्य देख्दा लाग्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै बिरामीलाई यस्तो व्यवहार गरेपछि को आउँछ मलाई कोरोना पोजिटिभ भयो भन्दै उपचार गर्न?’
कोरोना पोजिटिभ भएको खबर बाहिरिएको एक घन्टासम्म एकजना स्वास्थ्यकर्मी पनि इमर्जेन्सी वार्डमा नआउको उनले बताए।
‘त्यसपछि मेरो स्वास्थ्य अवस्था हेरेर भक्तपुर अस्पताल पठाउने तयारी थालियो। होम आइसोलेसनमा बस्न मिल्दैन र? भनेर सोधेँ,’ सुमन भन्छन्, ‘स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको र कोरोना लक्षण पनि भएका कारण तपाईंलाई भक्तपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा लानुपर्छ भने र त्यही दिन लगे।’
भक्तपुर अस्पताल पुगेपछिको त झन् सुमनले थप तीतो अनुभव सँगाले।
‘भक्तपुर अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा लगेर राखिदिए। त्यो बेलासम्म हिँड्न सक्ने नै थिएँ, बोल्न सक्ने थिएँ। एकचोटि डाक्टर र नर्सहरू आएर गएका थिए,’ उनी अनुभव सुनाउँछन्, ‘यसपछि ज्वरो नाप्ने थर्मामिटर अनि पल्स टेस्ट सबै आफैं गर्नु भनेर किट छाडेर गए। म त अचम्ममा परेँ। ल म त शिक्षित छु, अलि थाहा भयो मलाई। तर, विचरा आमाबुबाहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ? एकचोटि सिकाएर सिकिन्छ?’
‘अक्षर नचिन्नेले थर्मामिटर र पल्स टेस्ट आफैं गर्न सक्छन्?,’ सुमनले अस्पताल व्यवस्थापनलाई प्रश्न गरे, ‘कोरोना वार्डमा नापेको ज्वरो अनि अरू रिपोर्ट भाइबरमा मेसेज गरेर पठाउनुपर्ने रे!’
भक्तपुर अस्पतालको पारा देखेर हाँसो र रिस दुवै उठेको उनी बताउँछन्।
‘भाइबर एप छ भनेर थाहा नहुने लाखौं छन्। के सबै कोरोना संक्रमित शिक्षित नै हुन्छन् भन्ने छ? के सारा सर्वसाधारण टचस्क्रिन मोबाइल चलाएका र भाइबर भन्ने शब्द सुनेका छन्? के हामी दुई–चार लाखलाई थाहा भयो भन्दैमा सारा जनतालाई थाहा हुन्छ?,’ सुमन आक्रोशित पारामा प्रश्न गर्छन्।
उनी सायद दुई दिन भक्तपुर अस्पतालको आइसोेलेनमा बसे। त्यति बेलासम्म बस्नेबाहेक र केही औषधी दिएपछि कुनै स्वास्थ्यकर्मी हेर्न नआएको उनको गुनासो छ।
‘अरू कुनै चेकअप पनि गराएन्,’ उनले सुनाए।
आइसोलेसन बस्दा सुमनले डाक्टर साथीसँग फोनमा कुरो गरे। साथीले ‘एक्सरे गरायो कि गराएन’ भनेर सोधे।
उनले ‘केही गराएको छैन, अहिलेसम्म खोकीको औषधी र सिटामोलमात्र दिएको छ’ भने।
त्यसपछि साथीले ‘एक्सरे लिनुपर्छ, लिन लगाऊ’ भनेपछि सुमनले त्यहीँका डाक्टरहरूलाई फोन गरेर भनेपछि बल्ल एक्सरे गरेका थिए। डाक्टरले गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने जाँच बिरामीेले नै भनिराख्नुपर्ने अवस्था देखेर उनी चित खाएका थिए।
‘अहिले सोच्ने गर्छु, केही दिन भक्तपुर अस्पतालमा बसेको भए म आज तपार्इंसँग बोलिरहेको हुने थिइनँ सायद,’ उनी अहिले पनि त्रसित हुँदै भन्छन्, ‘दुई दिनमै मेरो अवस्था गम्भीर भएपछि मलाई टेकु अस्पतालको आइसियुमा लगेका थिए।’
टेकु अस्पताल पुग्दाको अनुभव
भक्तपुर जनस्वास्थ्य र भक्तपुर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भनेपछि भागभाग र अगाडि आउन डराएको अवस्था थियो।
‘अब टेकुमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै त होला भनेर मनमनै डराइरहेको थिएँ। तर, भक्तपुर अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा टेकु अस्पतालको आँगनमा ओर्लिनासाथ सबै स्वास्थ्यकर्मी मेरै लागि आइरहेका थिए,’ सुमन भावुक हुँदै भन्छन्, ‘ त्यो दृश्य देखेर म त खुसीले पागल झैं भएँ। पिपिई लगाएका एकजना दाइले हिँड्न सक्छौ भाइ भनेर मायाले भनेका थिए। मैले सक्छु भनेँ। तर, मेरो अवस्था देखेर केही सेकेन्डमै ह्विलचेयर ल्याएर गुडाउँदै आइसियु बेडमा लगे। म त चकित परेँ।’
सुमनले मनमनै सोचे– पहिला उपचार गरेको पनि सरकारी अस्पताल अनि यो टेकुको पनि सरकारी अस्पताल। तर, त्यहाँ गर्ने व्यवहार र यहाँ गर्ने व्यवहारमा आकास–पातालको फरक छ। यस्तो किन होला?
आइसियु पुगिसकेपछि गर्नुपर्ने सबै जाँच गर्न स्वस्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूको टोली नै आएको सुमन अझै बिर्सिंदैनन्। सबैको अनुहारमा हाँसो थियो। औपचारिक कुरा गर्दै जाचँ पनि गरिहेका थिए।
‘टेकु अस्पताल पुग्दा लाग्यो, म एकदम भिआइपी नै रहेछु कि भन्ने भान भयो,’ उनी हाँस्दै भन्छन्, ‘अहिले पनि आफू घरमा हुँदा ती नर्स, डाक्टरहरू सम्झेर उनीहरूलाई धन्यवाद दिइरहन्छु। उनीहरूको रातदिनको सेवाका कारण म आज सकुशल घर फर्किन पाएको छु।’
टेकुमा दुई दिन आइसियु बसेपछि सुमनको अवस्था झन्–झन् बिग्रिँदै गयो। त्यसपछि भेन्टिलेटरमै राख्नुप¥यो। भेन्टिलेटरमा राख्ने भनेपछि उनलाई ‘अब त बाँचिदैन होला’ भन्ने मनमा लाग्यो।
भेन्टिलेटरमा राखेपछि ५० प्रतिशतमात्र बाँच्ने आसा हुन्छ भन्ने थियो। भेन्टिलेटरमा राखेर अधिकांश बिरामीको मृत्यु हुने भन्ने सुनेका उनले आँखा चिम्म गरेर सबै परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेक सम्झेका थिए।
‘त्यो क्षण मेरा आखाँले आँसु रोक्न सकेनन्। मैले चाहेर पनि आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई अँगालो हाल्न र हेर्न पाएको थिइनँ,’ उनले भने, ‘आफ्नो अगाडि सबैजनाले सामान्य व्यवहार गरे पनि बाहिर सबै रोइरहेकै होलान् भन्ने अनुमान गरेँ। झन्, आमालाई सम्झिएपछि त आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ।
आफू भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थामा उता बुबा पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो तर मेरो अवस्था बुबालाई थाहा दिइएन।’
भेन्टिलेटरमा राख्ने दिन बिहानैदेखि टेकु आएका आमा, श्रीमती, बुहारी, साथीहरू सबै राति करिब १० बजेसम्म अस्पतालमै थिए। निको भएर घर आएपछि श्रीमतीले यी सबै घटनाबारे सुमनलाई बताएकी थिइन्।
केही दिन अचेत अवस्थामा रहेकाले आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए। विस्तारै केही सातामा स्वास्थ्य सुधार हुन थालेको थियो।
‘सबै स्वास्थ्यकर्मी, साथीभाइ, परिवारलाई एकदम धन्यवाद दिएँ,’ उनले भने।
भेन्टिलेटरमा राखेपछि दिनहुँ रगत जाँच गराउनुपर्ने, एक मिनेटमा १५ लिटरको अक्सिजन जडान गर्नुपर्ने र रातभरि अक्सिजन मास्क लगाएरै सुत्नुपर्ने अवस्था थियो उनको।
उनीहरूले साथ र आत्मबल नदिएको भए के हुने थियो त्यो कसैलाई थाहा थिएन।
‘सबैले आइसियुमा बसेको बेला फोन गर्ने, म्यासेज गर्ने, केही नभएको जस्तो खुसी भएर कुरा गर्ने, हौसला दिने, केही हुँदैन, हामी छौं नि भन्ने जस्ता धेरै शब्दले मेरो मनोबल बढाएको थियो,’ उनी भन्छन्।
त्यसैले कोरोना जित्ने महत्वपूर्ण औषधी आत्मबल भएको उनको बुझाइ छ। तर, स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भएको खण्डमा पिसिआर परीक्षण गराउन उनले सबैलाई अनुरोध गरे। पिसिआरमा पनि केही कमी हुनसक्ने सम्भावन रहे पनि पोजिटिभ भएको खण्डमा समयमै उपचार गर्न सकिने उनको अनुभव छ।
‘पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ कि भन्ने डरले पिसिआर नगराउने काम गर्नै हुँदैन,’ सुमन भन्छन्, ‘आत्मबल भएको खण्डमा कोरोना केही होइन भनेर पनि कोरोनालाई हेल्चेक्र्याइँ चाहिँ गर्नुहुन्नँ। रोग कति बलियो भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित रहनुपर्छ।’
उनी करिब २५ दिन भेन्टिलेटर बसेर घर फर्किएका अुज्। घर फिर्किसकेपछि पनि १४ दिन आइसोलेसन बसे। अहिले पनि उनलाई खोकी लाग्न छाडेको छैन। उनी अहिले घरमै शारीरिक व्यायाम, श्वासप्रश्वास व्यायाम गरिरहेका छन्। डाक्टरहरूको सल्लाहअनुसार भिटामिनबाहेक औषधी खाएका छैनन्। विस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएपछि खोकी लाग्न बन्द हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
‘इम्युनिटी पावर’ छ भनेर मास्क नलगाइ, स्यानिटाइजर नदल्ने वा साबुनपानीले हात नधुने, भौतिक दुरी कायम नगरी बस्यो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुने उनी बताउँछन्।
‘यो मेरो कोरोना यात्रा जिन्दगीको एक अविस्मरणीय क्षण हो, जसमा दुःख पनि थियो र सुख पनि। तर, मेरोजस्तो भोगाइ कसैले पनि भोग्न नपरोस्।
पूर्णस्वास्थ्य लाभ गरेपछि प्लाज्मा दान गर्छु,’ सुमनले भने, ‘सरकारी अस्पताल होस् त टेकुजस्तो। टेकु अस्पताल र कर्मचारीबाट अरू अस्पतालले सिक्न जरुरी छ। अब चाँडै भक्तपुर अस्पतालबारे प्रशासनमा भन्न जाने सोच बनाएको छु।’
प्रदेश २ : दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने जसपा र कांग्रेसको निर्णय, अलमलमा नेकपा
यसैगरी नेकपाका संघीय सांसदहरुले दसैं भत्ताको रकम कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, संघीय सांसदहरुले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय भएपनि प्रदेशको हकमा भने नेकपाका सांसदहरु अलमलमा परेका छन्। आयोमेल संवाददाता
जुगेडा नाका प्रकरण : केराउ तस्कर समाउन खोज्दा घाँटी रेटेर प्रहरीको हत्या
यद्यपि, त्यो नाकामा प्रहरी मारिएको यो पहिलो घटना होइन। करिब तीन साताअघि पनि यही ठाउँमा एक प्रहरी मृत भेटिएका थिए। तर, त्यो कुरा खासै सञ्चारमाध्यममा आएनन्। न त्यसबारे प्रहरीले नै सार्वजनिक रूपमा केही भनेको छ। माेहन जाेशी